ယခုလို နိုငျငံရေး အခွအေနတှေေ မဖွဈပျါခငျတုနျးက ရိုကျကူးထားတဲ့ သူမရဲ့ဗီဒီယိုလေး တဈခုကို ပရိတျသတျကွီးအား အလှမျးပွခေပြွ လိုကျတဲ့ မအေးသောငျး – Cele Cupid
ယခုလို နိုငျငံရေး အခွအေနတှေေ မဖွဈပျါခငျတုနျးက ရိုကျကူးထားတဲ့ သူမရဲ့ဗီဒီယိုလေး တဈခုကို ပရိတျသတျကွီးအား အလှမျးပွခေပြွ လိုကျတဲ့ မအေးသောငျး
EverBest M | July 4, 2021 | Celebrity | No Comments
ပွညျသူခဈြ သရုပျ ဆောငျ မမကွီး အေးဝတျရညျသောငျး က တော့ မွနျမာနိုငျငံ အတှငျး လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထုလှု ပျရှားမှုမြားတှငျ ပွညျသူတှနေဲ့ အတူ တကျကွှစှာ ပါဝငျခဲ့ တာကွောငျ့ ပုဒျမ ၅၀၅(က) ဖွငျ့ အရေး ယူခံခဲ့ရသူ အနုပညာရှငျ တဈဦး ဖွဈပါတယျ။လှနျခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးကေ တာ့ ၅၀၅(က) ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ အရေးယူ ထားခွငျးမှ ရုတျသိ မျးပေးခံခဲ့ရတဲ့ အနုပညာရှငျ(၂၄) ဦးထဲတှငျ ပါဝငျခဲ့ ပါတယျ … . ။
ဒီသတငျးကွောငျ့ သူမကိုခဈြတဲ့ ပရိသတျမြားနဲ့ မိသားစုဝ ငျမြားက ဝမျးသာနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။တိမျးရှောငျ နစေဉျကာလ အတှငျး သူမရဲ့ လှုပျရှား မှုတဈခြို့ ကိုလညျး ပရိသတျ တှေ သိရှိစဖေို့ လူမှုကှနျ ယကျမြားမှ တဈဆငျ့ ဝမြှေေ ပးနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။တဈခါတဈလလေညျး သူမနထေိုငျစား သောကျခဲ့ရတာတှေ ကိုလညျး တငျပေး နတော ဖွဈပါတယျ … . ။
မကွာသေး ခငျ ရကျပိုငျး လောကျ ကလညျး အေးဝတျရညျသောငျး ရဲ့ Instagram အကောငျ့ မှာ ဗီဒီယိလေး တဈခု တငျထား တာ ဖွဈပါတယျ … . ။ ဒါ က တော့ အာဏာ မသိမျးခငျ အခြိနျတုနျး က ရိုကျကူးထား တဲ့ ဗီဒီယို လေး တဈခုကို ပရိသတျ တှအေား ပွနျလညျ ဝမြှေလိုကျ တာပဲ ဖွဈပါတယျ … . ။ သူမက လညျး ” အရငျအခြိနျ တှေ ပွနျမရတော့ ဘူး 🥺” ဆို ပွီးရေးသားထားတာ ဖွဈပါ တယျ … . ။
ပရိသတျတှေ က လညျး ဒီ့ထကျကောငျးမှနျ တဲ့ဘဝတှေ ရရှိတော့မှာဖွဈတဲ့အတှကျ တောငျ့ခံထားပါဦးဆိုပွီး မအေးသောငျးကိုအားပေးစကားတှေ ပွောပေးထားကွတာကို လညျး မွငျတှရေ့ပါတယျ။အရငျလို ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့အ ခြိနျေ လးတှေ ပွနျလညျရရှိဖို့ တျောလှနျရေးတှငျ ကိုယျ တတျနိုငျတဲ့ အခနျးကဏ်ဍကနေ ပါဝငျဆောငျရှကျပေးကွဖို့ ပွောကွား ရငျး ဒီသတငျး လေးကို တငျဆကျ ပေးလိုကျ ရပါတယျ … . ။
ပြည်သူချစ် သရုပ် ဆောင် မမကြီး အေးဝတ်ရည်သောင်း ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှု ပ်ရှားမှုများတွင် ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့ တာကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် အရေး ယူခံခဲ့ရသူ အနုပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကေ တာ့ ၅၀၅(က) ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူ ထားခြင်းမှ ရုတ်သိ မ်းပေးခံခဲ့ရတဲ့ အနုပညာရှင်(၂၄) ဦးထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ ပါတယ် … . ။
ဒီသတင်းကြောင့် သူမကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်များနဲ့ မိသားစုဝ င်များက ဝမ်းသာနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။တိမ်းရှောင် နေစဉ်ကာလ အတွင်း သူမရဲ့ လှုပ်ရှား မှုတစ်ချို့ ကိုလည်း ပရိသတ် တွေ သိရှိစေဖို့ လူမှုကွန် ယက်များမှ တစ်ဆင့် ဝေမျှေ ပးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေလည်း သူမနေထိုင်စား သောက်ခဲ့ရတာတွေ ကိုလည်း တင်ပေး နေတာ ဖြစ်ပါတယ် … . ။
မကြာသေး ခင် ရက်ပိုင်း လောက် ကလည်း အေးဝတ်ရည်သောင်း ရဲ့ Instagram အကောင့် မှာ ဗီဒီယိလေး တစ်ခု တင်ထား တာ ဖြစ်ပါတယ် … . ။ ဒါ က တော့ အာဏာ မသိမ်းခင် အချိန်တုန်း က ရိုက်ကူးထား တဲ့ ဗီဒီယို လေး တစ်ခုကို ပရိသတ် တွေအား ပြန်လည် ဝေမျှလိုက် တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် … . ။ သူမက လည်း ” အရင်အချိန် တွေ ပြန်မရတော့ ဘူး ” ဆို ပြီးရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါ တယ် … . ။
ပရိသတ်တွေ က လည်း ဒီ့ထက်ကောင်းမွန် တဲ့ဘဝတွေ ရရှိတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် တောင့်ခံထားပါဦးဆိုပြီး မအေးသောင်းကိုအားပေးစကားတွေ ပြောပေးထားကြတာကို လည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။အရင်လို ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အ ချိန်ေ လးတွေ ပြန်လည်ရရှိဖို့ တော်လှန်ရေးတွင် ကိုယ် တတ်နိုင်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ ပြောကြား ရင်း ဒီသတင်း လေးကို တင်ဆက် ပေးလိုက် ရပါတယ် … . ။
ခရဈစမတျညရဲ့ အမှတျတရပုံလေးတှဝေမြှေရငျး မတျောတရျောတှပေျေါခဲ့တဲ့ မမဆောငျး
သူမ ရဲ့ အိမျနရေငျး ဖကျရှငျကို ခပြွလိုကျတဲ့ နနျးအမရာ ရဲ့ အကွမျးစားပုံမြား
မခို့တရို့ လေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ကပြထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် Xmue Xmueရဲ့ အမိုက်စား Tik Tok ဗီဒီယိုလေး